ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ( ဗျို့ ခရီးသည်ကြီး ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ( ဗျို့ ခရီးသည်ကြီး )
ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ် ( ဗျို့ ခရီးသည်ကြီး )
Posted by ကထူးဆန်း on Mar 2, 2014 in My Dear Diary | 99 comments
ဗျို့ ခရီးသည်ကြီး ……………
ခရီးသည်ကြီး ရဲ့ မဟာသံဝါသနေ့ ၊ ရိုက်စားကောက်ထည့်နှင့် သူကြီးသို့ပေးစာ http://myanmargazette.net/193988
– ဖတ်ရတော့ ပြန်ရေးချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာလို့ ဗျို့ .. ကွန်မန့်အောက်မှာ ရေးရင် ပုံ တင်မရတော့ ဒါတ်ပုံသက်သေ နဲ့ ပါ ပြချင်တာ နဲ့ ဒီကနေ ပြန်ရေးတာပါဗျာ ..
တစ်ခြားတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ .. ခရီးသည်ကြီးက
“တစ်ဂျူတီကို နှစ်သောင်းခွဲကနေ သုံးသောင်းဝန်းကျင်ပါ တဲ့ ။
ဘာတွေပါလည်းဆိုရင် ကုတင်နဲ့တဲ့တဲ့တစ်လုံး ၊ ပန်ကာအစုတ်တစ်လုံး ၊ နံစော်နေတဲ့ အိပ်ယာခင်းနဲ့ခေါင်းအုံးနှစ်လုံး ။”
..ဆိုလို့ မသိသူတွေ အဟုတ်မှတ် ကုန်မဆိုးလို့ဗျို့ ..
တည်းခိုခန်း ဟိုတယ်လောက တစ်ဂျုတီ ရယ်လို့ သုံးတာ ရှားပါတယ် ဗျ . ဆက်ရှင် ဆိုတဲ့ အသုံးအနုန်းဘဲ ခေါ်ကြပါတယ် ..ထားပါတော့လေ .. အဲ့ဒါတော့ လူပေါင်းများစွာ ခေါ်ဝေါ်တာဆိုတော့ ကျုပ် မသိတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှပေါ့ ..
ကျုပ်သိတာတော့ ဆက်ရှင် ရယ်လို့ဘဲ ခေါ်တာ သိတာ ဆိုတော့ ဆက်ရှင်လို့ဘဲ သုံး နုနန်းတော့မယ်နော် ..
အဲ့ဒီ့ဆက်ရှင်ကလည်း တစ်ချို့ ကနှစ်နာ ရီ ။ တစ်ချို့ က သုံးနာရီ ။ တစ်ချို့ က လေးနာရီ စသဖြင့် ကိုယ့်ဖောက်သည်တွေ ဘယ်လောက်လာသလဲ မှုတည်သတ်မှတ် လို့ အပြိုင်အဆိုင်လုပ်ကြသဗျ ..
အဲ ဈေး နုန်းကတော့ ခရီးသည်ကြီးရေ … ခရီးသည်ကြီး ကို ပြောပြတယ် ဆိုတဲ့ သူက ပိုပိုသာသာ ပြောသွားတယ် ထင်ပါ့ ..
ခရီးသည်ကြီး ပြောတဲ့ အခန်းအနေအထား ပန်ကာစုတ် နဲ့ ဆိုရင် အများဆုံး မှ ငါးထောင် ပိုနိုင်ဘူး ရယ် ..
အဲယာကွန်း အစုတ်နဲ့ဆိုရင်တော့ ရှစ်ထောင် လောက်ထိ တက်ယူသဗျ ။
အောက် က ပြထား တဲ့ အခန်းဆိုရင် သုံးနာရီ တစ်ဆက်ရှင် ကို မှ တစ်သောင်းသာ ယူတဲ့ အခန်းပါဗျာ ။
ကျုပ်တို့ မြို့သူားတွေ အဟုတ်ထင်လို့ သူများသွားပြောပြရင် တစ်လွဲဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါဗျာ .. ကြော်ငြာနေတာ မဟုတ်ပါဘူး နော် ။
အဲယားကွန်း ၊ တီဗွီ ၊ ရေခဲ သေတ္တာ ၊ ရေပူရေအေး နှဲ့ နေပျော်တဲ့ အခန်း ဆို တစ်သောင်း ကနေ တစ်သောင်းခွဲ လောက် အထိ ယူကြတယ်ဗျ ..
mini bar , TV နဲ့ aircond ခန်းပါ
အဲ ခရီးသည်ကြီးပြောတဲ့ နှစ်သောင်း ကနေ သုံးသောင်း ဆို အတော် ဟုတ်နေပြီဗျ ..
ခရီးသည်ကြီးကိုပြဖို့လိုက်ရှာတာ ပုံ မတွေ့တော့လို့ ဗျို့ .. အဲ့ဒီ့ ဟိုတယ် တစ်ခုဆို ရေချိုးခန်းက ဆီဒိုးနား Ambassdor suit ရဲ့ ရေချိုးခန်းလောက်တောင်ကျယ်သေး .. bath tub , standing shower နဲ့ အကျ အနဗျ ။
တစ်ချို့ ဟိုတယ် ဆို အခန်းရှေ့ အထိ ကားတိုက်ရိုက်မောင်း ၊ အပြင်က နေ တံခါးပြန်ပိတ် ၊လိုက်ကာပြန်ပိတ်ပြီး privacy အတွက် အထူး လုပ်ပေးထားတာတောင် ရှိသေး ။ အဲ့ဒီလို အခန်းမှ သုံးသောင်းခွဲ လောက်ယူတာ ဆိုတော့ ကျုပ်ပြောသလို ခရီးသည်ကြီး ကို ပြောတယ်ဆိုတဲ့ သူကပိုပိုသာသာ ပြောသွားတာပေါ့ဗျာ ။
အဲ အခန်းမရ ဘူးဆိုတာတော့ ဟုတ်တယ်ဗျို့ ။ မဟာသံဝါသနေ့ ဆိုတာကတော့ အဲ့ဒီလို သန့် တဲံ ဟိုတယ် တည်းခိုခန်းတွေ ကတော့ နေ့တိုင်း သူတို့ အတွက် မဟာသံဝါသ နေ့ဘဲဗျ ။ စနေ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက်ဆို ပိုဆိုးသေးဆိုဘဲ …. ဆိုတော့
ချစ်သူများ နေ့ ခမျာ မသိရှာတဲ့ သူတွေရဲ့ နံမည် အဖျက်ခံ နေရတာကိုးဗျ …
အဲ တစ်လက်စ ထဲ မပြောတော့ဘူး စိတ်ကူးပေမဲ့ ပြောလိုက်ဦးမယ်ဗျ ..
ရွာကြီး ခြောက်သွေ့လာတယ် ဆိုတာ ခရီးသည်ကြီး ကတော့ ကိုယ့်အတွေး နဲ့ ကိုယ်ပြော တာကိုးဗျ ..
ကျုပ်အတွေး နဲ့ ကျုပ် ဆိုရင်တော့ .. ဘဖော မှတ်ချက်ပေးထားသလို တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး ခင်မင်ရင်းနှီးလာတာတွေ ရှိလာသလို
( ကျုပ် အတွေးအထင်) မခေါ်မပြောချင်တာတွေလည်း ရှိလာလို့ ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာရယ်လို့ ကွန်းမန့်တွေ က ပိုစ်ထက်တောင် ကောင်းတယ် ဆိုတဲ့ မန်းဂွဇွတ် ကြီးမှာ တစ်ဦး နဲ့ တစ်ဦး ငြင်းခုန်မှုတွေ နည်းလာ တာ က တစ်ကြောင်း …………………………………
အပြောင်းအလွဲတွေကြား မပြောင်းလဲ ဘဲ ဆီးဂိမ်းနီးမှ ပိုဆိုးသွားတဲ့ အင်တာမဲကြီး က တစ်မျိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
နာ့ဝမ်းပူဆာ မနေသာဘဲ ရုန်းကန်လှုပ်ရှား ရတာတွေ ပိုလာ တာက တစ်ဖုံ နဲ့ မရေးအား မမန့်အားလာကြတာ ……………………….
စသည့်စသည့် အကြောင်းချင်းရာများ ကသာ အဓိက ကျမယ်လို့ ကိုယ့်အတွေး နဲ့ ကိုယ် တွေးမိကြောင်းပါ ….
ကျုပ်တို့ လူမှုဝန်းကျင် ဘာတွေပြောင်းလဲသွားတာလဲ
အမှန်တော့ သိပ်မပြောင်းလဲဘူး ထင်တာဘဲဗျ .. ကျုပ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ခုလို သတင်းက မမြန်နိုင်တော့ လူတွေ မသိကြတာလို့ဘဲထင်တာဘဲ ။
ငယ်ငယ်တုန်းက ခုလို တည်းခိုခန်းတွေ မရှိသေး ။ ရှိရင်လည်း ချုပ်ချယ်မှုများ နဲ့ မှတ်ပုံတင်မပါ မတည်းရ ဆိုတာတွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လုပ်ထားတော့ တည်းခိုခန်းရောက်ဖို့ မလွယ်တော့ ရောက်ဖို့လွယ်တဲ့ အင်းယားကန် ၊ ကန်တော်ကြီး ဘဲ ရောက်ကြ တိုးကြရတာကိုး….
အခုတော့ ပြေလျော့လာတာတွေလည်း ရှိလာ ။ တည်းခိုခန်းတွေလဲ များလာတော့ ပိုလုံခြုံတဲ့ဆီ တိုးကြသကိုး ။
ဒါပေမဲ့ သတင်းတွေ ကလည်း ခုလို ကျုပ် လဲ တင်နိုင် ၊ ခရီးသည်ကြီးလည်း တင်နိုင် ၊ ကျုပ်တို့ မြို့သူားတွေလည်း ဖတ်နိုင်ဆိုတော့ ပြန့်နှံ့ မှု့ မြန်လာလို့ ပိုသိလာတာကို ပြောင်းလဲ လာတယ်လို့ ထင်ကြတယ် ထင်တာဘဲဗျ ..
-မိဘ အများစုကတော့ နားလည်လက်ခံပေးတယ်ရယ်လို့တော့ မထင်ဘူးဗျ … အနဲစုလောက်သာ နားလည် လက်ခံပေးကြပါလိမ့်မယ် .. မိဘဘယ်လောက် ရာခိုင်နုန်းက တိတိကျကျ သိကြသလဲ ဆိုတာကလည်းမေးခွန်း တစ်ခုဘဲလေ ။ ကျုပ်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းကလည်း မိဘ မသိအောင် ခိုးပြီး လုပ်ခဲ့ကြတာဘဲ မဟုတ်ဘူးလား .. အခုလူငယ်တွေလည်း အများစုကတော့ မိဘ မသိအောင်လုပ်ကြတယ် ထင်ပါတယ်…
အရင်တုန်းကတော့ မသိကြ မမြင်ကြတော့ ဗိုက်ထွက်လာမှ သာ ဖုံးကြဖိကြတာ ကိုးဗျ .. အခုတော့ ဆေးတွေ တွင်ကျယ်လာတော့ ဗိုက်ကတော့ ထွက်မှာ မဟုတ်ပေမဲ့ လူပ်ရှားမှု့တွေ တွေ့မြင်လာရင်တော့ စပ်ဖြင်းဖြင်းတော့ ဖြစ်ကြမယ် ထင်တာဘဲ ..
– တကယ်တော့ လူသားတွေမှာ စိတ်ဝင်စားမှု့ မှာ ဒါကလည်း ပါနေတော့ ရှေ့တန်းတင်တယ် ထင်နေကြတာပါ ..
ရှေးလူကြီးတွေ ကလည်း ဒီလိုဘဲ ကျုပ်တို့လူငယ် အရွယ်မှာ အဲ့ဂလိုဘဲ အော်ခဲ့ကြတာပါဘဲဗျ ..
အခု ကျုပ်တို့ အဖိုးကြီးဖြစ်လာတော့လဲ ငယ်ငယ်တုန်းကအအော်ခံခဲ့ရတာ မေ့ပြီး အဲ့ဒီလိုဆက် အော်နေကြတုန်းဘဲ ..
ဒါပေမဲ့ လူငယ်တွေကလည်း ဆက်လုပ်နေဦးမှာဘဲ ..
ဒီလိုနဲ့ဘဲခောတ်ကြီး ကရွေ့လျား နေပြိး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်မဖြေနိုင်ရင်တော့ မော ကြဦးရဦးမှာ ပေါ့ …..
ကိုယ့်အတွေး နဲ့ ကိုယ်ပေါ့ ဗျာ …….. ..
ဒါနဲ့ ဒီအခန်းက လေးနာရီ တစ်ဆက်ရှင်မှ တစ်သောင်းနှစ်ထောင်တဲ့ဗျာ …
flat tv ,ရေခဲသေတ္တာ နဲ့ စာရေးစားပွဲ
bathtub နဲ့ ရေချိုးခန်း ။ သွားပွတ်တံ ၊ ဘီး ၊ နားကြပ်တံ အစုံထားပေးလိုက်သေး
ကျွန် မ ခု မှ ဖတ် မိ တာ
ငြင်း လဲ မ ငြင်း တတ် ပါ ဘူး
ကျွန် မ က လဲကိုယ် ထင် ရာ ကိုယ် လုပ် တတ် တဲ့ သူ
သူ များ တွေ လဲ သူ တို့ထင် တာ သူ တို့ လုပ် ကြ မှာ ပေါ့ 
ငယ် ရွယ် သူ ဆို ရင် တော့ တ မျိုး
ဝင့် ပြုံး မြင့်ကို ထောက် ခံ တယ်
ကျွန် မ အ တွေး အ ယူ အ ဆ
သူ နဲ့ ထပ် တူ ထပ် မျှ
ဟေး … လစ်ဘရယ်တစ်ယောက်ရပြီဟေ့။ လစ်ဘရယ်ဖြစ်နေရင် သိပ်မချောင်တော့ဘူးနော်။ အဲဒါလေးတော့ သတိထား ညီမလေးရေ။ မြန်မာပြည်မှာ လစ်ဘရယ်တွေ မရှင်သန်နိုင်ဘူး။ အထူးသဖြင့် မိန်းမတွေ လစ်ဘရယ်ဖြစ်ပြီဆိုရင် အင်မတိအင်မတန် လူသောက်ညင်ကပ်ခံရတယ်။
သြော် ကပ္ပွိယ ကြီးရယ် ..လာရောက်စေ့စပ်ကြောင်းလမ်းပြီဆိုမှတော့ အစမ်းသဘော ပေါင်းကြည့်ချင်တယ် ပြောပါ့ မလား ။။ ပေါင်းပြီးသား ဖြစ်နေပြီပေါ့ကွယ် …
အခု LT , LT ဆိုနေတာက မိဘ စီမံပေးကြတာ မဟုတ် ။ သူတို့ချင်း ချစ်ကြိုက်ကြလို့ နှစ်ဦးသဘောတူ နေထိုင်မှုကိုပြောနေကြတာ ပါ ။ မိဘတွေက နားလည်ပေးနိုင်မှု မမှု့ကိုပြောနေတာ …. လာတောင်းပြီး အစမ်းသဘော နေကြည့် ရအောင်ပြောနေတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး ….
ကပ္ပွိယ ကြီး သမီး သဘောတူ နေရင် ကပ္ပယကြီးတောင် သိလိုက်မှာ မဟုတ်ဘူး … ခွိခွိ .. အဲ့ဒီ့ အချိန်ကျ ဘယ်သူ့  ငှက်ကြီးတောင် နဲ့ လိုက်ခုတ်မှာတုန်း ..
မိဘတွေမျက်နှာ အိုးမဲမသုတ်တဲ့ သမီးလိမ်မာလေးကို တင့်တောင့်တင့်တယ် မင်္ဂလာဆောင်ပေးပြီးမှ မင်္ဂလာအိပ်ခန်းထဲ သမီးလေး လူမသိသူမသိ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
လုံမလေးမွန်မွန်ကပြောတယ်။ ဟိုနိုင်ငံက LT ဆိုတာ ဒီနိုင်ငံက LT နဲ့ မတူဘူး။ မှန်ပါတယ်။ ဟိုနိုင်ငံမှာက တစ်အိုးတစ်အိမ်ခွဲထွက်သွားပြီး နေတာ။ ဒီမှာကတော့ ဒီလိုသာ တစ်အိုးတစ်အိမ် ခွဲထွက်ပြီးနေနိုင်မယ်ဆိုရင် ဘယ် LT နေပါတော့မလဲ။ အတည်ပဲယူကြတော့မှာပေါ့။ ငွေကြေးအပါအ၀င် အစစအရာရာ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဒီနိုင်ငံမှာက တည်းခိုခန်းမှာပဲ LT နေကြတာ။ ဒါကို semi LT လို့ သတ်မှတ်ရမယ်။ (ဂဇက်ကြီးလည်း ဝေါဟာရအသစ်အဆန်းထွင်တဲ့ ဂဇက်ကြီးဖြစ်နေပြီ ဟိ။ မစ္စတာဂီကလည်း ယောက္ခဖ ဆိုတဲ့ ဧရာမဝေါဟာရကြီး တီထွင်ခဲ့ဖူးတယ်။ )
အန်တီမာ ပေးတဲ့ ရေဘူးဥပမာလေးကလည်း ကောင်းတယ်။ ကြားဖူးတာ တစ်ခု ပြောပြချင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့ အသိအန်တီကြီးက သူ့သမီးလေး အိမ်ထောင်ပြု ချင်တော့ ကောင်လေးဘက်ကလည်း ဘာမှပြောစရာမရှိ၊ လူကုံထံထဲကပဲ။ ဒါပေမယ့် အန်တီကြီးက ဒီကောင်လေး တစ်ခုခုမှားနေတယ်ထင်တယ်။ အပြစ်ပြောစရာကလည်း မရှိ။ သမီးကလည်း ရူးရူးမူးမူးဆိုတော့၊ အဲဒီ အန်တီကြီး ဘာလုပ်တယ် ထင်သလဲ။ အိမ်အပေါ်ထပ် တစ်လွှာလုံးကို ပေးပစ်လိုက်တာ။ LT နေဖို့။ တစ်နှစ်လောက် LT နေကြည့်ခိုင်းတာ ၆လပဲခံတယ်။ အဲဒီတော့မှ အဲဒီကောင်လေး ဆေးသမားမှန်းသိတာ။ အန်တီကြီးဟာ သူ့သမီးကို ဒီနည်းနဲ့ ကယ်ခဲ့တာ။
နောက်ထပ် ဥပမာတစ်ခုကတော့ မျှစ်ကြော်ရဲ့ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ သူငယ်ချင်းက LT မနေဘူး။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီးမှ သူ့လူက man to man ကြီးဖြစ်နေမှန်းသိလိုက်ရတယ်။ သူ့ကိုယူတာကတော့ စားရေးသောက်ရေး အဆင်မပြေလွန်းလို့ ချက်ပြုတ်ရေးအတွက် ယူတာပါတဲ့။ အဲဒီလင်မယား အကြီးအကျယ် အမှုပွေပြီး ကွဲကြတယ်။
LT ကို ညွှန်းလွန်းနေတာ မဟုတ်ပါ။ ဒီလူနေမှုစနစ်ဟာ သိပ်အဆင့်မြင့်လွန်းတော့ ကျမတို့တိုင်းပြည်နဲ့ မသင့်တော်သေးဘူး။
မုန့်လုံး စက္ကူ ကပ်ဖြစ်နေပါပြီ ခင်ဗျာ
ခင်ဗျားတို့ပဲ ( Deleted By Mod ) လုပ်လွန်းတယ်
အ၀ှာပဲနေနေ သူခံနိုင်ရင် ခံမှာပဲ အခြောက်ကော အစိုကော
၃၇၇ ဆိုတာ လင်မယားချင်း doggy စတိုင်ကျင့်ရင်တောင်
အဲ့ပုဒ်မနဲ့ငြိတယ်။ 69 မပါသေးဘူးနော်.. ခွိးးး။ ခင်ဗျားတို့ကကော ( Deleted By Mod )
သေချာရင် ပေါ်တင်ပြောလိုက်ပါ။ ကလေးတွေကို LT တို့ ဘာညာတို့ ပြောမနေပါနဲ့။
အပိုတွေလုပ်မနေကျနဲ့ဗျာ။ လူဆိုတာ ကိုယ့်စိတ် ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့
နေထိုင်ကျတာ။ စနစ်နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ အခြေချထားတဲ့ စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်.. ခိခိ..
ဆဲဒယ်ဗျာ.. ဆဲဒေါ့ ( Deleted By Mod )..
မဆဲပါနှင့် mgpoe zar ရေ ။
Complain လုပ်နေကြပါတယ် ။
Thakhin CJ says:
ပြီးတော့ ဆဲ ထားတာလေးတွေရော
အို အားလုံးအားလုံး ဖတ်လို့ ကောင်း
အာ့ ကြောင့် မန်းဒလေး ဂေဇက် ကို
.ယောကျာ်းလေးမို့ လက်မထပ်ခင် အတွင်းသိအစင်းသိ သိအောင် အတူ အိပ်သင့်တယ်
အိပ်တာအပြင် အမူအကျင့်တွေ စိတ်နေသဘောထားတွေကိုပါ အနီးကပ် လေ့လာပြီးမှ တစ်ဘဝလုံးစာအတွက် ရွေးချယ်သင့်တယ် ဆိုတဲ့အယူအဆ လက်ကိုင်ထားချင်ချင်. . .
ဒါမယ့် ကိုယ့် သားသမီး(အထူးသဖြင့် သမီး) ဆိုရင်ကော. . . အဲ့လို ပေး လွှတ်မှာလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းက ဝင် လာတော့. . .
ခုန အယူအဆကို အင်တင်တင် . . .
ကိုယ့်တစ်ဘဝလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ရွေးရမယ့် သူစိမ်းကို တစ်နှစ်လောက်တော့ အချိန်ယူပြီး လေ့လာသင့်တယ် ထင်တာပါပဲ။
တည်းခိုခန်းလည်း တစ်ခါ နှစ်ခါ သွားပေါ့။
ဒါမှ ယောကျာ်းကျန်းမာရေး မိန်းမကျန်းမာရေး ဘာညာ ဘယ်သူ ဘာ ချို့တဲ့တယ် မချို့တဲ့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကို သိမှာကိုး။
အဲ့တစ်ခါနှစ်ခါနဲ့တင် လူလေးတွေ ထပ်ထွက်မလာအောင် ရောဂါဘာညာတွေ မကူးအောင်တော့ အကာအကွယ် ဆောင်ပြီး လက်တွေ့လေ့လာပေါ့။
တခြား အမူအကျင့်တွေ စိတ်နေသဘောထားတွေ အယူအဆတွေ သိချင်ရင်တော့ တည်းခိုခန်း မလိုတော့ဘူး ထင်တာပဲ။ တည်းခိုခန်းတို့ ဘာတို့ထဲကျတော့ လူမမြင်ကွယ်ရာမှာ ပြုမူ ပြောဆိုတာတွေကို လေ့လာ။
လူမြင်ကွင်းမှာလည်း လေ့လာလို့ ရသမျှ လေ့လာပေါ့။
အဲ့ဒီလို LT ကိုတော့ လက်ခံပေးသင့်တယ် ထင်တာပဲ။
တခြားတိုင်းပြည်တွေတောင် အဲ့ထက်မက အတွေးအခေါ် အပြုအမူတွေ လွတ်လပ် ပွင့်လင်းနေကြပြီပဲလေ။
အဟိ.. ပြန်ငြင်းကြဦးမလားဟင်.. လူဆိုတာ အချိန်နဲ့လိုက်ပြီး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေတာဆိုတော့.. ဒီအချိန်ပြန်ငြင်းရင် ဘယ်သူတွေက ဘာတွေပြန်ပြောကြမလဲ သိချင်တာ.. ကိုယ်တိုင်တောင် အတွေးအခေါ်တွေ ပြောင်းနေတာဆိုတော့..